"Dmitrovsky potato": vanim-potoana 2021 - gazetiboky "Potato System".
Sergey Averin, agronomista Dmitrovsky Potato LLC
Ny toeram-pambolenay - LLC "Dmitrovsky potato" - dia ao amin'ny distrikan'i Nekrasovsky ao amin'ny faritra Yaroslavl. Ny lohan'ny orinasa dia Alexander Alekseevich Pilipchuk.
Ny toeram-pambolena dia manokana amin'ny famokarana ovy voa. Ny fanaparitahana voa dia manomboka amin'ny minitraubers ary mifarana amin'ny taranaka elite. Ny orinasa dia miara-miasa amin'ny fikambanana toy ny LLC LVM RUS, HZPC Sadokas, Stet Rus LLC. Ny orinasa dia miasa amin'ny teknolojia holandey, ny toeram-pambolena dia manana traktera John Deer marobe, ary misy koa ny fitaovana GRIMME: mpamboly ovy, mpijinja ovy (anisan'izany ny varitron 270 self-propelled harvester). Ny orinasa dia manana fitaovana maoderina trano fanatobiana entana: misy bunkers (ho an'ny fandraisana ovy avy any an-tsaha), fehikibo fitaterana.
Ny toeram-pambolena dia mivoatra, isan-taona dia mampitombo ny habetsahan'ny faritra fambolena, dia mirotsaka amin'ny fananganana fitehirizana vaovao ho an'ny fitahirizana akora voa.
Tamin'ny taona 2021 dia nanokana 271 hektara ho an'ny ovy ny toeram-pambolena, manodidina ny 9214 taonina ny vokatra azo, 34 t/ha ny vokatra antonony.
Saingy tsy afaka ny tsy hanamarika aho: sarotra ny taona ho an'ny faritra Yaroslavl manontolo, ny hafanana dia saika ny vanim-potoanan'ny ovy manontolo. Ny tsy fahampian'ny hamandoana dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fitomboana sy ny fivoaran'ny zavamaniry, misy fiantraikany ratsy amin'ny tuberization. Saingy nisy ihany koa ny tombony: noho ny mari-pana ambony sy ny hain-tany dia nihena ny isan-jaton'ny fiparitahan'ny zavamaniry, tsy nisy ny tara-pahazavana, ny alternariose eny an-tsaha, ny fisehoana mitokana amin'ny scab mahazatra sy volafotsy ihany no voamarika, fa araka ny filazan'izy ireo, dia izao fotsiny. "kilema kosmetika".
Amin'ny ankapobeny, afaka milaza isika fa ny vanim-potoana dia nivadika ho ambany, fa ny kalitaon'ny ovy dia eo amin'ny ambaratonga ambony indrindra.
Tags: potato growingFaritra Yaroslavl
Ireo manam-pahaizana manokana ao amin'ny sampana ao amin'ny Institution Federal Budget "Rosselkhoztsentr" ao amin'ny faritr'i Yaroslavl dia nanao fanadihadiana momba ny ovy voa amin'ny habetsahan'ny 3,548 arivo taonina. Ny fahasimbana be indrindra amin'ny aretina tara dia...
Ny faritra Yaroslavl dia afaka nitazona ny vidin'ny legioma amin'ny borsch set
Hifarana ny hetsika fijinjana any amin'ny faritr'i Yaroslavl. Ankehitriny ny vidin'ny legioma any amin'ny faritra Yaroslavl, anisan'izany ny "borscht set", ...
Ao amin'ny Repoblikan'i Dagestan, ezahina ny hampitomboana ny famokarana voly amin'ny fambolena avy amin'ilay antsoina hoe "borscht set". Ovy, laisoa, karaoty, tongolo ...
Webinar AHDB: Famonoana. Ahoana ny fomba fampiharana vahaolana diquat
Nandritra ny herinandro lasa, 22% ny vidin'ny tongolo tany Russia